I-Bentley ivula udidi lokhuphiswano lwabafundi-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Bentley ivula iqela lokukhuphisana kwabafundi
I-Bentley ivula iqela lokukhuphisana kwabafundi
Bentley Systems ubhengeze ukuba iye uvule udidi ibhaso ngenxa abafundi abaya kuqwalaselwa ukuba kuhanjiswe BE Awards 2009 ngamabhaso ukuba bahambe $ 1,000 kulo ngalunye kwezi ndidi nxaxheba ezintlanu iindlela software ukusetyenziswa kwezemfundo kweli ziko nxaxheba.
IiYunivesithi kunye neekholeji zobugcisa Bayakwazi isiphakamiso iiprojekthi kwenye kwizintlu ezintathu:
1 Uyilo lwezakhiwo
2 Uyilo olusetyenzisiweyo usebenzisa Izixhobo ezivelisayo
Kuloluhlu ngalunye lwezi zigaba zintathu abafundi kufuneka babonise ukuba yintoni ingxaki ekufuneka ixazululwe kunye nesisombululo esisetyenziswayo Izicelo zeBentley.
Abafundi Abafundi bezikolo eziphakamileyo banokuthatha inxaxheba kuyilo lweziko lemidlalo lokucinga kwangaphambili ngokusebenzisa iMicrostation PowerDraft XM inguqulelo. Igama lodidi lukhona ...
4. Uyilo lweziko lemidlalo elizayo
Nabani na omnye umfundi okanye umqeqeshi angathatha inxaxheba kwisigaba sesihlanu esivulwe kuwo wonke uluntu kwimeko yemfundo:
5. Uboniso kunye nezobugcisa bezobugcisa.
Ukufumana ulwazi oluninzi ungafaka isicelo kule dilesi: www.bentley.com/AcademicBEAwards, umhla wokuvala ukuhambisa iiprojekthi yi-20 February 2009.
Ukuxhuma imigca nge-Microstation Geographics
Sika u kuluma kwii-6